विराटनगरमा आजदेखि व्यापार मेला विराट ट्रेड एक्स्पो–२०१८ः मुख्यमन्त्री राईले गरे उद्घाटन
२५ गतेसम्म कर तिनुपर्ने सरकारी निर्देशनको व्यवसायीद्वारा विरोध
गन्तव्य नेपाल ग्रुपद्वारा दोस्रो चरणमा ५० पत्रकारलाई पिपिई लगायत स्वास्थ्य सामग्री प्रदान
आगामी वर्षको बजेट ः कुन क्षेत्रमा बढ्यो, कुन क्षेत्रमा घट्यो ?
पर्वतारोहीहरुको खुसी छिट्टै फर्कने छ ः पर्यटन मन्त्री भट्टराई
हानले होटललाई क्वारेन्टाई बनाउन दिने
बिचार / बिश्लेशण
प्रकाशित मिति: 2018/12/21
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने बताउनु भएको छ ।
मोरङ व्यापार सङ्घ विराटनगरद्वारा आयोजित व्यापार मेला विराट ट्रेड एक्स्पो–२०१८ को आज उद्घाटन गर्दै उहाँले मोरङको औद्योगिक केरिडोरलाई उद्योग हव बनाउने पनि घोषणा गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास र समृद्धि खोज्न कठिनाइ हुने भन्दै विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउन कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले विराट ट्रेड एक्स्पोले यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन थप टेवा दिने चर्चा गर्दै व्यापार र उद्योगलाई बढावा दिने विराटनगर किमाथाङ सडकको २३ किमी ट्रयाक खोल्न मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले व्यापार मेलाले यस प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा थप प्रेरणा मिल्ने धारणा राख्नुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले नगर क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ भन्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले राजनीतिक क्रान्तिपछि अब नैतिक क्रान्तिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले उद्योग र व्यापारका क्षेत्रमा लागेका मानिसलाई हौसला प्रदान गर्न सरकारी कामकाज सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवन शारदाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा उद्योगी मोति दुगडले पनि विराट एक्स्पोको महत्व माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
प्रदेश नं १ मा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, उद्योग व्यापारको प्रवद्र्धन गर्ने, कला संस्कृति र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विराटनगरको शंकरपुरमार्ग विराट मेडिकल अस्पतालको नजीकै पुस ६ देखि १४ गतेसम्म लाग्ने सो मेलामा प्रत्यक्ष रुपमा रु २० करोडको आर्थिक कारोवार हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मेला समितिका सदस्य ललित सिंकडाले जानकारी दिनुभयो ।
मेलामा नेपालका २०८ र भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका ४२ गरी २५० वटा स्टल छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्री, मेशिनरी पार्टपुर्जा, गाडी, तयार पोशाक, छालाका सामान, हस्तकला वस्तु, साडी, कृषि सामग्री, मोबाइल र टेलिफोन जस्ता सामानको स्टल रहने छ ।
अध्यक्ष / प्रधानसम्पादक
माधव प्रसाद सुबेदी
गन्तव्य नेपाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित गन्तव्य नेपाल न्यूज डट कम
सुचना बिभाग अनलाईन संचार माध्यम दर्ता प्रमाण पत्र नं. २२४ / ०७३ / ०७४
कार्यालय कमलादी काठमाडौं
सम्पर्क :- ४२५८५८१
इमेल :- news@gantabyanepal.com.np,